धनी देश इजरायललाई अमेरिकाले खरबौँ आर्थिक सहयोग किन गर्छ ? | Online News Portal in Nepal. Aba Bishesh Khabar, Harekpal Special Khabar.
धनी देश इजरायललाई अमेरिकाले खरबौँ आर्थिक सहयोग किन गर्छ ?
२०७८ जेष्ठ ११, मङ्लबार, ८: ३९PM
एजेन्सी : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनबाट उनका आफ्नै डेमोक्र्याटिक पार्टीका केही नेताहरूले अमेरिकाले इजरायललाई दिएको आर्थिक सहयोगका बारेमा प्रश्न गरिरहेका छन्। सिनेटका बर्नी स्यान्डर्सले भनेका छन् कि अमेरिकाले पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ त्यसमा अत्यन्त नजर राख्नुू पर्छ। सन् २०२० मा अमेरिकाले इजरायललाई ३.८ बिलियन डलर (३८ अरब डलर) को आर्थिक सहयोग दियो। यो लामो समयको लागि वार्षिक मद्दतको अंश हो । २०१६ मा ओबामा सरकारले ३८ अर्ब डलरको प्याकेज सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो, जुन २०१७-२०२१ को अवधि हो । यो अघिल्लो दशक भन्दा करीव ६ प्रतिशत बढी छ। थप रूपमा, गत वर्ष संयुक्त राज्यले शरणार्थीहरूलाई बसोबास गर्न ५० लाख डलर मद्दत गरेको थियो। इजरायलको दीर्घकालीन नीतिमा उनले अरू देशहरूबाट आएका यहूदीहरूलाई बसोबास गर्छन्। संयुक्त राज्यले इजरायललाई विगत केही वर्षहरुमा संसारको सब भन्दा उन्नत सेना बनाउन सहयोग गरेको छ।अमेरिकी कोषको सहयोगमा इजरायलले अमेरिकाबाट सैन्य उपकरणहरू खरिद गर्छ ।
उदाहरणका लागि, इजरायलले ५० एफ ३५ विमानहरू किनेको छ । जसलाई मिसाइल हमलाका लागि प्रयोग गरिन्छ। प्रत्येक विमानको मूल्य १० मिलियन डलर हो। गत वर्ष इजरायलले आठ केसी ४६ ए बोइंग पेगासस विमान खरिद गर्यो जसको मूल्य करीव २.६ बिलियन (२६ अर्ब) डलर छ। तिनीहरू एफ-३५ जस्तो विमानमा हावामा ईन्फिल गर्न सक्छन्। इजरायलसँग आइरन डोम भनिने एक मिसाइल रक्षा प्रणाली रहेको छ। यसले आफ्नो छेउमा प्रक्षेपित क्षेपणास्त्रहरू नष्ट गर्दछ।
इजरायललाई दिइएको ३.८ बिलियन मध्ये, ५०० मिलियन डलर यो सैन्य रक्षाको लागि थियो। २०११ देखि अमेरिकाले इजरायलको आइरन डोममा १.६ बिलियन डलर लगानी गरिसकेको छ।यसका अतिरिक्त इजरायलले अमेरिकासँग सैन्य प्रविधिमा काम गर्न लाखौं डलर खर्च गरेको छ। इजरायली सरकारले सैन्य उपकरण र प्रशिक्षणमा धेरै पैसा खर्च गर्दछ। क्षेत्र अन्य देशहरू भन्दा धेरै सानो भएको कारणले, यसले आफ्नो रक्षा प्रणाली सुधार गर्नका लागि दिइएको मद्दत प्रयोग गर्दछ। यसका लागि धेरै कारणहरू छन्। सन् १९४६ मा, अमेरिकाले छुट्टै यहूदी देश बनाउन सहयोग पुर्‍याएको थियो। थप रूपमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायललाई मध्यपूर्वमा एक महत्वपूर्ण सहयोगीको रूपमा देखेको छ ।
यु एस कंग्रेसल रिसर्च सर्भिसका अनुसार अमेरिकी वैदेशिक सहायताले यो सम्बन्ध सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। अमेरिकी अधिकारी र नेताहरूले लामो समयदेखि यस क्षेत्रलाई इजरायलको महत्वपूर्ण सहयोगी ठानेका छन। अमेरिकी विदेश सहायता एजेन्सीका अनुसार, अमेरिकी सहयोगमा इजरायलले यस क्षेत्रमा वरपरका खतराहरू सम्बन्धी सैन्य धार कायम गर्न सक्षम छ। मध्यपूर्वमा अमेरिकाका लगानीमा रहेका ठूला ठूला तेल कम्पनी रहेका छन् । त्यस्तै मुस्लिम विश्वमा आफ्नो प्रभाव राख्न पनि इजरायललाई आफ्नो पकडमा राखेको छ । त्यस्तै खाडीको तेलमाथि आफ्नो पकड जमाई राख्न इजरायलाई खरबौँ सहयोग गर्ने गरेको छ । अमेरिकाको दुष्मन देश इरान, चीन र रुसलाई व्यालेन्समा राख्न इजरायलमा अमेरिकाले पकडमा राखेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अघिल्लो लेखमाहङकङमा लाखौं कोरोनाविरुद्धको खोप खेर गयो
अर्को लेखमास्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चको संयोजकमा वेदराज अधिकारी चयन